Isinxibelelanisi sePowerCON sisidibanisi sombane esenziwe yiNeutrik yokudibanisa umbane wamandla kwizixhobo kwindawo encinci. Ijongeka kwaye isebenza ngokufanayo kwi-SpeakOn Connector, kunye nesinxibelelanisi somgca esifakwe kwiChassis Connector kwaye sijijekile ukwenza unxibelelwano ...
Isandi Thetha kwiPaneli yaBafazi yeNtaba yeSocket Connector
Isidibanisi se Speakon Audio siyilelwe ngenkqubo yokutshixa enokuthi yenzelwe ukudityaniswa okanye ukujija kohlobo. I-SpeakOn Connectors zenziwe ngohlobo ezimbini, ezine kunye nesibhozo. Isinxibelelanisi somgca sepali ezimbini siya kudibana nesinxibelelanisi sephaneli sepali ezine, ukuqhagamshela ku +1 kunye no -1; kodwa ...
Isinxibelelanisi seXLR Chassis (Isinxibelelanisi seCannon) luhlobo lwesinxibelelanisi sombane, ikakhulu esifumaneka kwizandi, ividiyo kunye nezixhobo zokukhanyisa kwinqanaba. Izihlanganisi ziyisetyhula kuyilo kwaye zinezikhonkwane eziphakathi kwesithathu nesixhenxe. Ziqhelekileyo zihambelana nokunxibelelana kwe-audio intercon ...
I-Zhejiang Lianzhan Electronics Co, Ltd Inikezela ngoMgangatho woMgangatho weCannon yabasetyhini iPhaneli yeChassis Mount XLR izihlanganisi zabaThumeli beB2B kunye nabaSebenzisi kwicandelo lokuxuba, iiGuitar Amps, iVidiyo yeVidiyo kwihlabathi liphela. Ixabiso lentengo yeXnR yePaneli yokuXhuma iPhaneli ukusuka eLianzhan isekwe kwi-Bulk Order Quanti ...
Isidibanisi sefowuni yomsindo (ikwabizwa ngokuba yiFowuni Jack, Audio Jack, i-Headphone Jack okanye iJack plug) lusapho lwezihlanganisi zombane. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa iimpawu zomsindo we-analog. Umgangatho kukuba iplagi (echazwe njengesihlanganisi samadoda) iya kudibanisa nejack (echazwe njengowasetyhini). 6.35mm ...
Zhejiang Lianzhan Electronics Co, Ltd., Yasekwa ngonyaka ka-2008, ichwephesha yobuchwephesha kwimveliso kunye nokuthumela ngaphandle ii-jacks ezi-6.35, iijack zomsindo, izihlanganisi ze-xlr, i-xlr audio combo jack, isokhethi yespeon, isixhobo sokudibanisa i-powercon, i-rca jack, i-dc jacks njlnjl. imihlaba ye mixers, isandi console, gui ...